PHOTOSHOP မှာဓာတ်ပုံကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လို - PHOTOSHOP ကို - 2019
အဓိက Photoshop ကို
ကျနော်တို့ Photoshop မှာဓါတ်ပုံပါစေ
Strimingovye န်ဆောင်မှုဂီတစျေးကွက်လွှမ်းမိုးဖို့ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ပါ, ဤဟာအလွန်ယုတ္တိရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအဖြေရှင်းနည်းများတစ်ခုချင်းစီ, ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲစေခြင်းငှါမည်သူမဆို၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင်ကြိုက်နှစ်သက်ဂီတ, သူမ၏နားထောင်ဖို့နဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းပေးထားပါတယ်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှရဲ့ဂီတရှိသည်ဖို့, စတိဗ်ဂျော့ဘ်ရဲ့စကားအတွက်သင်ခွင့်ပြုပါ။ ရုံသူ့ကုမ္ပဏီ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. - Android အတွက် Apple က Music ကိုလျှောက်လွှာ - ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
သီချင်းနားထောင်ဘို့မဆို strimingovogo ဝန်ဆောင်မှု၏လူသတ်သမား-feature ကို - ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြံပြုချက်များ၏အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသမိုင်းပြဇာတ်အပေါ်အခြေခံထားတယ်ကတည်းကသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများ၏တစ်ဦးချင်းဦးစားပေးလုပ်ဖို့တကယ်ပဲကိုယ်ပိုင်နှင့်ကောင်းစွာအဆင်ပြေအောင်နှင့် Apple ထုတ်ကုန်, စာနယ်ဇင်းက "လိုပဲ" / "ကြိုက်မနေပါနဲ့" ကူးပြောင်းခြင်းပုဒ် skip နှင့်အခြားအချက်များ။ အကြံပြုချက်များနေ့စဉ် update လုပ်ပေမယ့်အဆိုပြုချက်၏အသံအတိုးအကျယ် Spotify နှင့် Google Music ကို Play နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်မဖြစ်စလောက်ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ အဆုံးစွန်သော, လမ်းဖြင့်, တစ်ဦးချင်းစီကမ်းလှမ်းမှုအကောင့်သို့နေ့နှင့်အသုံးပြုသူ၏တည်နေရာ၏အချိန်ယူပြီး, အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက် updated နေကြသည်။
သို့သော် Apple ကဂီတအတွက်အကြံပြုချက်များကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်သူတို့ဆံ့သောအကြောင်းအရာသောသူအပေါင်းတို့သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အပိုင်း "သင်သည်" သင်ကနေ့၏တိကျသောဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်အယ်လ်ဘမ်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောယခင်ပြဇာတ်အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မနေ့ကရှေ့တော်၌ထိုနေ့၌သင်တို့အားဂျေမီ XX စကားကိုနားထောင်, အခု Apple ကသူ့ကိုတူသောအနုပညာရှင်၏အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရရန်သင့်အားပေးထားပါတယ်။ အလားတူပင်တေးသီချင်းတွေနှင့်အတူ: အကအခြားရွေးချယ်စရာအနေဖြင့်တစ်ခုခုကိုနားထောင် - ဤသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအများအပြားအယ်လ်ဘမ်ကိုင်ဆောင်။ ထို့အပြင်, အောက်ပိုင်းဒေသမှာမဆိုအနုပညာရှင်၏အဖွင့်စာမျက်နှာ၌, သငျသညျတူညီသောသို့မဟုတ်နီးကပ်ဦးတည်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်သောသူတို့၏အမျိုးအစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
playlists နှင့် collection များကို
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အကြံပြုချက်များနဲ့ tab တွင်ပါရှိသော "သင်သည်"နေ့စဉ် updated သောအကွာအဝေးရာ၏ဖွင့်စာရင်းများကို, ဆံ့။ အကြောင်းအရာအလိုက်သို့မဟုတ်အမျိုးအစား collection များကိုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အနုပညာရှင်၏ဖွင့်စာရင်းများကို - သူတို့နှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ နှင့်သေချာသော "hodgepodge" (ဥပမာ: ဂီတပါဝင်တဲ့ "ဒီပွဲတော်စိတ်ဓါတ်များ," သင့်လျော်သောစိတ်ဓါတ်များ set): ပထမဦးဆုံးတစ်ဦး ( "2010 ခုနှစ် Indie hits" ဥပမာများအတွက်) တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစား / တစ်နှစ်အဆိုပြုချက်ကိုဖြစ်နိုင်သည်။
" ... အဓိကအရာ" တစ်ဦးသဘင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း;
" ... အသေးစိတ်ခုနှစ်တွင်" - ကြားနာမှာဖြစ်နိုငျကွောငျး, ဒါကြောင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုမဟုတ်, သူတို့သာအပုဒ်မှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်;
"ထိုအခါ ... " - ထိုသို့သောဖန်တီးမှုအားနည်းချက်ကို၏ညှနျကွားပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်သီချင်းများအဖြစ်ဂီတအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သစ်တစ်ခုမှတ်တိုင်,
"လှုံ့ဆော်မှု၏ ... တစ်ဦးအရင်းအမြစ်" - ဟုဆိုနိုငျသောအဆိုတော်များနှင့်ရေးစပ်သီ, သရုပ်ဆောင်စိုက်ပျိုးတော်မူပြီ
"ဝိညာဉျခုနှစ်တွင် ... " - အလားတူဂီတအဆိုတော်နှင့်သီချင်းများ;
" ... ဧည့်စတား" - အနုပညာရှင်နှင့်အတူပုဒ်။
ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားခွဲများအဓိက, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး "အနုပညာရှင်များကပြသစာရင်းများ"သငျသညျကိုနားထောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအခါအပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ကအားလုံးအခြား။ ဤအဖွင့်စာရင်းများကိုမဆိုတွင်, သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနုပညာရှင်၏ကဲ့သို့၎င်း, ဦးတည်ချက်အတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်ကမှအလားတူအခြားအရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အလားတူရလဒ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနုပညာရှင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်လျှင်, search box မှတဆင့်ရယူနိုင်ပါသည် "ပြသစာရင်းများ".
Apple ကကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောဂီတပြတိုက်မှူးများကဤသီချင်းစာရင်း - ဖွင့်စာရင်းများကိုတစ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအပိုင်း "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" တွေ့နိုင်ပါသည် "ရွေးချယ်ထားသောသီချင်းစာရင်းများ" (နောက်ဆုံးရနှင့်အတူဥပမာ,), ရွေးချယ်မှုအောက်မှာ "အားကစားနှင့်ခံစားချက်", "အနုပညာရှင်များကပြသစာရင်းများ" (ကအများကြီး သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိသာဤအချိန်, အကြံပြုချက်များအတွက်အမျှ) ။ သီးခြားစီတိကျတဲ့ဂီတအမျိုးအစားများအပေါ်ဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်ပြတိုက်မှူးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောလူပေါင်းကားပေးအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျလွတ်လပ်စွာဖွင့်စာရင်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူ shared နှင့်မည်ကဲ့သို့အခြားသူများကိုဖန်တီးအရာကိုနားထောင်ရန်နိုင်ပါသည်။
"ဟု New Music ကို" - သင်အပေါငျးတို့သဝတ္တုတွေနဲ့ခင်မင်သိကျွမ်းရနိုင်သောနေရာ Apple ကတေးဂီတအက်ပ်၏အပိုင်း။ ဒီနေရာတွင်ကနောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများအပါအဝင်အယ်လ်ဘမ်နဲ့ဆိုရင် single, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်သောဗီဒီယိုအဖြစ်ဖွင့်စာရင်းများကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောများထဲတွင်မသာဘုံဖြစ်ပါသည် "အကောင်းဆုံးအသစ်အဆန်း"ဒါပေမယ့်ဂီတအမျိုးအစား / စီမံကိန်းများတွင်အသစ်အပုဒ်နှင့်အတူစာရင်းထဲသို့။
ထုတ်ကုန်အသစ်တွေမသာ၏ရင်ပေါင်တန်း, ဒါပေမယ့်လည်းဂီတဈေးကွက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို၏မြေတပြင်လုံး၌အစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူသည်အဘယ်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်စေရန်, Apple ကအပိုင်းလိမ်း collection များကိုအမျိုးမျိုးယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုကမ်းလှမ်း "ထိပ်တန်းဇယားများ"။ ဤတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနားထောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း / ကျောက်လုံးကြီး / ပိုအပေါင်းတို့၏အများဆုံးဝယ်သီချင်းများ, ဂီတအယ်လ်ဘမ် (ရွေးချယ်ရေးစံဆင်တူ) အဖြစ်နားထောင်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှု၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအသီးသီးဖြစ်ကြသည်။
အထက်ကျနော်တို့ပြီးသား Apple က Music ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အပိုင်းများတွင်ဗီဒီယို၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပွီ, ဟုတ်တယ်, လျှောက်လွှာထဲမှာသူတို့အသံအသံသွင်းနဲ့တန်းတူအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
မရတိုင်း strimingovy ဝန်ဆောင်မှုထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာ၏ရှေ့မှောက်တွင်အရာ၌ဝါကြွားနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကကအများကြီးပိုလွယ်နှင့် YouTube ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့ပိုနေသားတကျဖြစ်ပြီး, ဗီဒီယိုကစားသမားအဆင်ပြေမတောက်နေသည်အဖြစ်ကမှန်ကြောင်းပြောပေမယ်ကြောင့် Apple ကဂီတအတွက်အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုအပိုဆောင်းလျက်နှင့်မပင်ဖြစ်သည်လိမ့်မည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့ကိုအကြောင်းကို - ထိုအခါသေးခြင်း, ကောင်းတဲ့အမှုအရာရှိသတည်း။
အနုပညာရှင်နှင့် Apple အနေဖြင့်သီးသန့်အကြောင်းအရာ
အတော်များများကဂီတအဆိုတော်သီးသန့် Apple ရဲ့ဂီတမှာသူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကို, အယ်လ်ဘမ်နှင့်ဂီတဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်, အချို့တို့ကိုပြုဘယ်တော့မှအစီရင်ခံဝန်ဆောင်မှုထက်ကျော်လွန်သွားပါ။ သီချင်းတွေဗီဒီယိုကလစ်ပ်အပြင်, လျှောက်လွှာထဲမှာသင်ကအနုပညာရှင်တွေ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်တိကျသောအယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှု၏ဥပမာအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်း) ၏ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအရေအတွက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
မကြာသေးခင်က Apple ကသာဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှာပြီး watch, နာမည်ကျော်အမေရိကန်ပြပွဲ "ဟုအဆိုပါကျည်တောင့်ကာရာအိုကေ" ရန်အခွင့်အရေးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ နောက်ထပ်သီးသန့် Apple ကတေးဂီတ - ပြပွဲ "applications များ၏ Planet ကို" (နည်းပညာ၏ကမ္ဘာမှတစ်ဦးက X-Factor ၏မျိုး), အိုင်တီ-စက်မှုလုပ်ငန်းစတင်များဂီတသမားများနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များအရင်ကဆိုရင်အဖြစ်မှန်သို့မိမိတို့၏စိတ်ကူးများကိုဖွင့်ကိုကူညီဖို့အဘယ်မှာရှိ။
ချိတ်ဆက်ပါ - ထိုအနုပညာရှင်နှင့်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Apple ကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း, ဒီအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအနုပညာရှင်နှင့်ပရိတ်သတ်ကသူတို့လှုပ်ရှားမှုများလာမည့်စီမံကိန်းများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်းကိုသီးသန့်အကြောင်းအရာ, သတင်း, ဟောပြောပွဲထုတ်ဝေရန်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျနိုငျသညျ။
Connect ကိုအကြီးအလူကြိုက်များမဂီတအဆိုတော်, မ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များရရှိခဲ့သည်မဟုတ်။ ထိုအသေး, ဒီ strimingovom ဝန်ဆောင်မှု၌ဤ "ဟုလမ်းပိုင်းနှင့်အတူလူမှုကွန်ယက်" ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်တိကျတဲ့ပရိသတ်ကိုရှိပါတယ်, နှင့် Apple သူတို့ကိုယ်သူတို့မှန်မှန်တက်သည်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်သီချင်းတွေကိုထိပ်။
ဂီတအယ်လ်ဘမ်, ဆိုရင် single, တစ်ဦးချင်းစီသီခငျြးမြား, ဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့် collection များကိုအပြင်, ဂီတထဲမှာ Apple ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုရှိပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု၏အခြေခံတွင်အမှန်တကယ်စတူဒီယို, ထိပ်, ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များနှင့်ရှိုးပွဲသည့်အပြည့်အဝ Beats ရေဒီယို 1, အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ စကားမစပ်အများအပြားအနုပညာရှင်များ၏ "Premiere" သူတို့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေပဲလေထဲတွင်။ ဝန်ဆောင်မှု, Apple ရဲ့ application ကို၏အစဉ်အလာ, ဂန္အသိထဲမှာရေဒီယိုများအပြင်၌, သင်ရှာဖွေအကြောင်းအရာအလိုက်, အမျိုးအစားရေဒီယို station များနှင့်တိုက်ရိုက် 1 bits နှင့်သင်အသံဖမ်းနားထောင်နိုင်သည်နိုင်ပါတယ်။
Apple ကဂီတ, အခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြား၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုမသာနားထောင်ရန်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်း collection များကိုအပေါ် created, ဒါပေမယ့်လည်း "ပြေး" မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုဘူတာရုံ။ သင်ဤသို့မဟုတ်ဂီတဖွဲ့စည်းမှုနဲ့တူခဲ့လျှင်, သာဆင်တူသီချင်းတွေကို play တံ့သော၎င်း၏အခြေခံပေါ်မှာရေဒီယိုကိုသက်ဝင်မှစာသားမိုဘိုင်း device ကို screen ပေါ်မှာဘုံဘိုင်၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်, သူတို့သည်လည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်မှသေချာနိုင်ပါတယ်။
Apple က strimingovogo ဝန်ဆောင်မှု၏လက်နက်တိုက်ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအနုပညာရှင်များထံမှ 45 သန်းသီချင်းတွေကိုရှိပါတယ်, ဤအထင်ကြီးအရေအတွက်ကအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်း၏မျက်နှာကြက်မှာတင်ဆက်မဆိုသီချင်းအယ်လ်ဘမ်သီချင်းစာရင်းကိုသို့မဟုတ်ဗီဒီယို, သငျသညျကိုသတိပြုမိရအကြောင်းအရာမှအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့စာကြည့်တိုက်မှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အမြဲကျနော်တို့ Apple က Music ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကနဦးအဆင့်တွင်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လျှင်, အကြံပြုသီချင်းတွေကို၏စာရင်းထဲတွင်သင်ယခုအချိန်တွင်ကိုနားထောင်ချင်သောအရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျဘူး။ ရုံထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်အဖြစ်သင်ရုံလြောကျသင် search function များအားအသုံးပွုနိုငျ, တိကျတဲ့တစ်ခုခုကိုနားထောင်ချင်သည့်အခါ။ ဒါဟာရှာဖွေရေး box ထဲမှာရိုက်ထည့်ဖို့လုံလောက်လျှောက်လွှာတစုံတယောက်သောသူသည်အပိုင်းအနေဖြင့်လက်လှမ်း, လိုအပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်တယ်, သင်ကိစ္စကိုသို့အရတစ်ချိန်ကသင်အကြောင်းအရာစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ အနုပညာရှင်, သီခငျြးမြား, အယ်လ်ဘမ်များ, သီချင်းစာရင်းများကို - ဆက်ပြောသည်အဆင်ပြေဘို့, ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။
အားလုံး strimingovye န်ဆောင်မှုမဆိုမိမိတို့၏မျက်နှာတအကြောင်းအရာများအော့ဖ်လိုင်းနားထောင်ခြင်းအားဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တင်သွင်းတစ်ခုတက်ကြွအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့်သူကစာရင်းသွင်းခြင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်စျေးကွက်ကုမ္ပဏီကြီးများမှကြွလာလျှင်နေကြသည်။ မဆိုဂီတအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုတည်းလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏စာကြည့်တိုက်မှဆက်ပြောသည်င့်တဲ့သီချင်းစာရင်းကို, သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း device ကိုမှမကယ်တောင်မှအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရှိဘဲနားထောင်နိုင်သည်။ အဆိုပါဆွဲယူတဲ့အကြောင်းအရာကရိုးရှင်းစွာပံ့ပိုးကူညီပါဘူးသာဇာတိ applications များအတွက် Third-party ကစားသမားပြန်ကစားလိမ့်မည်သတိပြုပါ။
အဆိုပါ Apple ကဂီတ settings ကိုသင် file ကို save ဖို့တည်နေရာကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် - ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ၏ (SD ကတ်) မှတ်ဉာဏ်။ သင်တို့သည်လည်းပါ0င် MB ကနေ 1 GB ကိုရန်အကွာအဝေးအတွက် cache ကိုအရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုနောက်ဆုံးပေါ်လျှောက်လွှာကိုနားထောင်သောဂီတ၏အစိတ်အပိုင်းထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါဟာအစအပိုင်းကျရောက် "ဒေါင်းလုတ်" ထိုသို့ cache ကို update လုပ်မထားဘူးကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်လည်းမရှိ။
Apple ကဂီတအဖြစ်က၎င်း၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များအပေါငျးတို့သတဲ့ paid ဝန်ဆောင်မှု strimingovym ဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်နှင့် / သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း - ဤပလက်ဖောင်းအားလုံးအတူတူပင်အစီအစဉ်ကို run ။ ကျနော်တို့ပလက်ဖောင်းအဖြစ်အများအပြားသုံးအဖြစ်ရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်:
အဘို့ကိုစိတ်ကြိုက် 169 ရူဘယ် / လ;
၏မိသားစု 269 ရူဘယ် / လ;
၏ကျောင်းသား 75 ရူဘယ် / လ။
စာရင်းသွင်းမှုများကိုအသီးအသီးအဘို့အပိုဆောင်းအသုံးအနှုန်းများတရားဝင် site ကိုသို့မဟုတ်သင့်မိုဘိုင်း app ၏သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းများသည်အခြားနိုင်ငံများတွင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, ရုရှားအဘို့ဖြစ်ကြ၏။
ရုရှား interface ကို။
ကို Android operating system ကိုကနေပလီကေးရှင်းမလုံလောက်တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှု (ဥပမာ, ဖွင့်စာရင်းများကိုမှလင့်များအပြင်, အစားက၎င်း၏ဖောက်သည်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်ထက်, ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးခလုတ် "ဟု Apple ကဂီတကိုနားထောင်" ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ);
ပင်ဟာ FlagShip ပစ္စည်းတွေမှာရှားပါးမအောင်မြင်မှုများ, Hang, ပျက်ကျ,
မိုဘိုင်း device အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ပုဒ်မျိုးပွား၏အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေ,
တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအားနည်းချက်ကတော့ subscribe ရန်လိုအပ်ကြောင်းထင်ရပေမည်။
Apple ကတေးဂီတ - အငယ်ဆုံးတဦး, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာစျေးကွက်အပေါ်ဦးဆောင် strimingovyh န်ဆောင်မှုများပါတကား။ မိမိအပြီးသားချမ်းသာကြွယ်မာလ်တီမီဒီယာဒေတာဘေ့စအဆက်မပြတ်သီးသန့်အကြောင်းအရာအပါအဝင်ပြည့်ကြီးထွားလာသည်နှင့်လျှောက်လွှာသူ့ဟာသူ features အသစ်နှင့်စွမ်းရည်များရရှိသည်။ သင်ဆဲဝန်ဆောင်မှု၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုသိမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်ကြိုးစားသောအကြံပြု, ပိုကသုံးလများအတွက်အခမဲ့အစမ်း subscription ကိုဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Download အခမဲ့ Apple ကဂီတ
Play Store မှ app ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
ဗီဒီယို Watch: Filter CSS3 - 13 AplicadosaVideos - Efectos Fotograficos @JoseCodFacilito (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Photoshop ကို 2019